Totally Awe.sm Yemagariro Media Ongororo | Martech Zone
Chipiri, June 19, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kana zvasvika kushambadziro yemagariro enhau, analytics ndiye mutambo unochinja. Pasina analytics inova padhuze nekusagona kuona kuti ndeapi macampaign akabudirira, kupi kwekutungamira kushambadziro mari, uye chii chinobatana nevatengi. Zvisinei analytics nekuda kwe analytics hazvibatsiri. Ivo chete avo vanotsanangura mashandiro enhau enhau anowedzera kukosha kana kukonzera shanduko zvine basa.
Awe.sm inoita kushambadzira kwekuita kwemagariro enhau. Inosimudzira vezvenhau analytics ne "inoitika inoitika," ichibvumira mabhizimusi nevashambadziri kuwana mhinduro yakajeka uye yakayerwa kumibvunzo yakadai seyokuti nhepfenyuro yemagariro enhau yakagadzira kudzvanya kune webhusaiti, mangani emabatirwo akadaro akashandurwa, kukosha kweshanduko dzakadai, nezvimwe.
awe.sm ndiyo inotungamira chikuva chemakambani kuti ishandise data revanhu. Isu tinoyera kuti kushambadzira pasocial sezvakaita Facebook zvinyorwa uye zvinyorwa zveTwitter zvinotungamira kumhedzisiro ine chinangwa, sekusaina, kutenga, uye zvimwe zvinangwa zvebhizinesi
Heino hurukuro naScobleizer inoratidza Awe.sm uye VIPLi.st, chikumbiro chinoshanda chinoratidza kugona kweAwe.sm:
Awe.sm inopa yekushambadzira chishandiso, kana iwe unogona kuisanganisa iyo iripo workflows. Iyo inoteedzera yega yega yemagariro midhiya yega uye inopa ruzivo rwakadzama senge chiteshi, nguva yezuva, mameseji, zvemukati uye nezvimwe. Iyo inosangana neGoogle Analytics uye inopa iyo Kudzoka pane investment yemagariro midhiya kana ichienzaniswa nedzimwe nzira dzekutengesa.
Awe.sm's yega yega post level metric inobvumidza kuenzanisa kuri nyore kuti uwane iwo mabatanirwo anobaya. Semuenzaniso, vanhu vanogona kusaina chiitiko chakatumirwa. Awe.sm inodonhedza pasi uye ndoona kubva kupi tweet kana re-tweet, kana Facebook kutumira kana kugovana vanhu vakasaina, vanobva. Uye, iyo mishumo inopfuura kungorekodha zvavanoda kana zvikamu, uye nekupa matanho kana kukosha mumari yemari.
Awe.sm inopa zvirongwa zvitatu zvakasiyana: chirongwa chega chewe chirongwa chimwe, chirongwa che pro chinobvumidza kubata mapurojekiti gumi akasiyana panguva imwe chete uye chirongwa chebhizimusi icho chinobvumidza kubata huwandu husingaverengeki hwemapurojekiti panguva imwe chete. Zvirongwa zvebhizinesi zvinopa rakazara rakashongedzwa zvemagariro midhiya kuita kwekutevera sarudzo kusanganisira kukosha kwakawedzerwa masevhisi senge echinyakare ma URL, tsika-yakagadzirirwa mishumo, kugona kubatanidza dheedhe reass.sm mumishumo yeimba uye nezvimwe.
Tags: analytics apiAPIkutya.smrobert scoblemagariro enhau analyticspasocial media apivipli.st
Nhare Inotora Desktop yeEndaneti Inovhura
Jun 20, 2012 pa5: 35AM
Zvemagariro midhiya kushambadzira analytics inzira yakanaka yekuratidzira mashandiro enzira dzevanhu kuita basa rakakosha mukutevera yako saiti…